Jose Mourinho Oo Ku Xanaaqay Wariye Xilli Uu Bixinayay Wareysi Ka Dib Barbarihii West Brom +Video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Jose Mourinho Oo Ku Xanaaqay Wariye Xilli Uu Bixinayay Wareysi Ka Dib Barbarihii West Brom +Video
Jose Mourinho ayaa u dulqaadan waayay soo jeedin aheyd in kooxaha Manchester United iyo West Brom ay ciyaareen ciyaar isku dheelitiran kulankii barbaraha ku dhamaaday ee Old Trafford.
Wareysi uu siinayay BBC, wariyaha ayaa weydiiyay tababaraha United haddii ay labada kooxood is kansaleen taasoo keentay in Mourinho uu caroodo islamarkaana uu dalbado sharaxaad ku saabsan su’aasha.
Waxa uu u sheegay BBC: “Ma garanayo waxaad kala jeedo? Maxaad kala jeedaa?”
Wariyaha ayaa markaas yiri: “Labo kooxood oo isku dheelitiran miyay ahaayeen maanta?”
Mourinho ayaa ku jawaabay: “Ma sidaas ayaad u maleyneysaa? runtii sidaas miyay kula tahay? Ma u maleyneysaa inay taasi tahay su’aasha”
Wariyaha ayaa isku difaacay inuu arkay isaga iyo tababaraha West Brom oo isla dhoolacadeynaya ka dib dhamaadkii ciyaarta.
“Waa dhoolacadeynayay sababtoo ah waa saaxiibkeey. Kama aanan hadleynin ciyaarta. Ma waxaad u maleyneysaa inay ciyaarta aheyd mid isku dheelitiran. Waan dhoolacadeyn karaa haddii aan guuldareysto haddii aan badiyo ama haddii aan barbaro galo, taasi waxba kama gelin qaabka ay ciyaarta aheyd.
“Waan ka xumahay inaan iraahdo balse tani waa su’aal doqonimo ah. Marka ay koox bartamaha garoonka ka soo gudubto kaliya hal jeer 90ka daqiiqo oo dhan, kooxda kalena ay kubada ku heysatay qeybta garoonka kooxda ka soo horjeeda, iyagoo isku dayaya inay goolal dhaliyaan, adna waxaad ii sheegeysaa inay koox kansashay kooxda kale?
“Marnaba qasab naguma noqonin inaan kubad difaacano, kubad ma aanan difaacanin, waqtiga oo dhan kubada ayaan heysanay, David de Gea waxa uu ahaa mid hurda, madaama uu hurday waxa uu sameeyay waxaas qosolka leh. Waxaan ku qoslayay waxaas maada ah ee uu sameeyay, waana sida kaliya ee wax sidaas ah looga jawaab celiyo.
HALKAN KADAAWO VIDEOGA MRINHO OO XANAQSAN